ရေပူစမ်းကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေပူစမ်းကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (အင်္ဂလိပ်: Spring Temple Buddha; တရုတ်: 中原大佛 နှင့် ရိုးရှင်းတရုတ်: 鲁山大佛; ရိုးရာတရုတ်: 魯山大佛) သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးရုပ်တု ဖြစ်သည်။ အမြင့်သည် ၂၀ မီတာ (၆၆ ပေ) ရှိသော ကြာပလ္လင်ပါဝင်ပါက ၁၂၈ မီတာ (၄၂၀ ပေ) ရှိသည်။ ဖော်သုရှန်း ရှုခင်းသာ ဧရိယာတွင် တည်ရှိသည်။ National Freeway အမှတ် ၃၁၁ နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိသည်။ ရုပ်ပွားတော်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ တိုင်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပွားတော်၏ တည်နေရာမှာ ဟဲနန် ပြည်နယ် လူရှန်းစီရင်စု ကျောက်ချွင့်ရပ် တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
33°46′30″N 112°27′03″E﻿ / ﻿33.775082°N 112.450925°E﻿ / 33.775082; 112.450925﻿ (Spring Temple Buddha (Lushan, China))ကိုဩဒိနိတ်: 33°46′30″N 112°27′03″E﻿ / ﻿33.775082°N 112.450925°E﻿ / 33.775082; 112.450925﻿ (Spring Temple Buddha (Lushan, China))
၁၂၈ မီတာ (၄၂၀ ပေ)
၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
အောက်ခံခုံသည် ၂၅ မီတာ (၈၂ ပေ) မြင့်သည်။ ရုပ်ပွားတော်သည် အောက်ခံခုံ၏ အပေါ်တွင် တည်ထား၏။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ပွားတော်ကြီး တစ်ခုလုံး၏ စုစုပေါင်း အမြင့်သည် ၁၂၈+၂၅=၁၅၃ မီတာ (၅၀၂ ပေ) ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ရုပ်ပွားတော် တည်ထားသည့် တောင်ကုန်းကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အောက်ခံခုံကိုလည်း နှစ်ခု ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သည်။ အပေါ်ဘက်ရှိ အောက်ခံခုံသည် ၁၅ မီတာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ပွားတော်၏ စုစုပေါင်း အမြင့်သည် ၂၀၈ မီတာ (၆၈၂ ပေ) ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပွားတော် တည်ထားကိုးကွယ်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်သည် ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းကို ရုပ်တုတည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ တည်ဆောက်ရာတွင် copper cast ၁၁၀၀ ကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း အလေးချိန်သည် ၁၀၀၀ တန် ရှိ၏။ ရုပ်ပွားတော်၏ အောက်ခြေသည် ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပွားတော်၏ အမည်သည် ထျန်းရွေ့ရေပူစမ်း ၏ အနီးတွင် ရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ခေါ်ဝေါ်သည်။ ထျန်းရွေ့ရေပူစမ်းသည် အပူချိန် 60°C ရှိ ရေများထွက်ပြီး ထိုဒေသတွင် အနာရောဂါများ ပျောက်ကင်းသည်ဟူသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ထင်ရှားသည်။ ဖော်ချွမ် ကျောင်းကို ထန်မင်းဆက်လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ "Bell of Good Luck" ကိုလည်း ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီး နဂါးခေါင်းထိပ်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ကြေးညိုများဖြင့် သွန်းထားသည့် ထိုခေါင်းလောင်းသည် ၁၁၆ တန် လေးသည်။
Foot (as seen from human height)
↑ (တရုတ်) 中国佛山金佛-153米卢舍那佛 - 墨宝斋 Archived 1 September 2008 at the Wayback Machine.
↑ (တရုတ်) 世界第一大佛鲁山大佛 Archived 28 December 2008 at the Wayback Machine.
↑ Fodushan Scenic Area။ 30 September 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေပူစမ်းကျောင်းတော်_ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်&oldid=666804" မှ ရယူရန်
၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။